Rob Zombie dia nanamafy ny horonantsariny manaraka dia hampifanaraka ny sitcom fahitalavitra 'The Munsters'
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Rob Zombie dia nanamafy ny horonantsariny manaraka dia hampifanaraka ny Sitcom amin'ny fahitalavitra 'The Munsters'
nosoratan'i Trey Hilburn III Jona 7, 2021
Rob Zombie dia karazana karatra bibidia. From Tranon'ny Corpn 1000 ny 31, Zombie dia hery tokony isaina ary teboka fizarazarana tanteraka eo amin'ireo mpankafy. Rob Zombie dia mitonona ho tenany The Munsters fanatisme. Nanome ny feony tamina fanehoan-kevitra vao haingana aza izy The Munsters làlan'ny fanehoan-kevitra blu ray. Ilay rangahy, manana tehina mafana aza antsoina hoe Dragula namboarina ho modely The Munsters fiara. Zombie dia nanamafy ny tsaho efa ela nino fa handray ny fampifanarahana sitcom TV The Munsters.
Toa ny zava-misy fa ny Zombie mankany Budapest hiasa amin'ny tetikasa amin'ny faran'ity taona ity dia natao ho an'ny The Munsters. Manantena izahay ny hahita ireo mahazatra ao amin'nyThe Munsters fam Manomboka amin'ny vadin'i Sheri Moon Zombie toa an'i Lily Munster, sy Jeff Daniel Phillips mety hilalao an'i Herman.
Tsy mbola nanamafy ny sary Universal. Saingy, antenaina tokoa fa marina izany ary tsy hanao hadalana i Zombie. Adala ny mieritreritra sarimihetsika Zombie PG na PG-13. Saingy, heveriko fa nesorin'i Eli Roth izany Ny trano misy famataran'ora amin'ny rindrina, ka angamba azo atao izany.
Ahoana ny hevitrareo momba ny firotsahan'i Rob Zombie ao a Munsters fampifanarahana? Hevero fa izy no marina? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
House of Wax dia ho tonga amin'ny andian-tsarimihetsika fanangonam-bolan'ny Scream Factory tsy ho ela. Vakio bebe kokoa ary alao mialoha ny kopiao eto.